တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီပုံပြင်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီပုံပြင်များစက်တင်ဘာလ 23, 2006 ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအထဲသို့ပြေး ဝင်. ထားတဲ့ကာတွန်းရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးသည်  မတ်လ 22, 2008 ခုနှစ်မှ CW အပေါ်, (အသီးအသီးရာသီအတွက် 13 ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ) 26 ဖြစ်စဉ်များနှင့်2ရာသီ spanning ။ အဆိုပါအခန်းဆက်တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီဘောင်းဘီတိုကနေခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်သရုပ်ဆောင်နှင့်လည်းပြဇာတ်ဘောင်းဘီတိုအတုယူဖို့ကာတွန်း၏ရုပ်မြင်သံကြားကြားမှာအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
2005 ခုနှစ်တွင် Warner Bros. Animation ရဲ့ကထုတ်လုပ်ပြပွဲ၏ပထမဦးဆုံးရာသီ၏တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီ Co-ဖန်တီးသူယောသပ်ကိုဘာသူသေဆုံးမီအမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အချို့အတိုကာတွန်းအပေါ်ပုံပြင်အကြွေးလက်ခံရရှိ, တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်လမ်းတွဲခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူသုံးအတိုကာတွန်းပါဝင်ပါသည် မူရင်းပြဇာတ်ဘောင်းဘီတိုကဲ့သို့တူညီသော runtime ။ ဒါ့အပြင် 30 မိနစ်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်လေထုသုံးခုပြသ၏အသီးအသီးဆောင်ပုဒ်အချို့ကိုအမျိုးအစားရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တွမ်နှင့်ဂျယ်ရီပုံပြင်များ&oldid=304126" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၁၆၊ ၀၅:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။